Banyere Anyị - Guangzhou Baiyi Intelligent Equipment Co., Ltd.
Usoro nke imeghari
Usoro nke TTO feeder
Usoro nke nri nkịtị
Usoro nke Ntanetị Standard
Usoro nke Desk-top feeder
Usoro Nri & Sorting System
Usoro nke Nkpuchi Ihu Nri & Mbipụta
Series Intelligent edingnụrụ & Printing Platform
Usoro nke ọgụgụ isi agụụ-elu, Ihe Input Fenụrụ Platform
e guzobere na 2010, na-elekwasị anya na "ọgụgụ isi nri technology" & "ọgụgụ isi na-ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu" nnyocha & mmepe na rụpụta. Anyị anọwo na agbaso "mmepe & imekọ ihe ọnụ, mmeri-mmeri maka ọdịnihu" nkà ihe ọmụma azụmahịa, mgbe niile na-ebu "onwe-adabere ọhụrụ, na-eduga nwere ọgụgụ isi nri technology" mmepe atụmatụ, ntị ka ọrụ 'ahụmahụ na ahịa nghazi, nọgidere na-agbasa ụkpụrụ ụlọ ọrụ. Ugbu a, BY nwere ọgụgụ isi nri akụrụngwa, usoro na ikpo okwu ngwọta e tinye n'ọrụ America, Germany, Italy, Korea, India, Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippine, Singapore wdg Anyị nwekwara alaka ụlọ ọrụ dị na ndịda ọwụwa anyanwụ Asia, North America na Europe maka ahịa & ọrụ.
"Innovation & development" bụ isiokwu isiokwu nke BY.
Ike okike inyocha ihe ohuru sitere na isi mmalite nke mmepe. Teknụzụ ọhụrụ nwere nnukwu nweta: nwere ọtụtụ patent nke mepụtara & ịba uru nlereanya patent yana nwebisiinka na enen anyị onwe anyị isi-technology.
"Improvementga n'ihu mma & gafere onwe anyị" bụ ụzọ nke ọhụrụ. Ofụri Esịt obibia & nditịm igbu ISO9001 International quality management na-ewu siri ike àgwà akara ọkọlọtọ. Main ngwaahịa gafere OA akwụkwọ. BY ga-ewuli a ukwuu mma n'ọdịnihu na mma ngwaahịa & mma ọrụ.
Anyị nwere ụlọ ọrụ nyocha & ike mmepe kachasị ike na onye ọrụ siri ike. Anyị na-eme ike anyị karịa ndị ahịa 'na-atụ anya na ngwaahịa & ọrụ kwa ụbọchị. Anyị tụkwasịrị obi: naanị ihe ọhụrụ, anyị nwere ike ichebe uru nke onwe anyị; naanị ihe ọhụrụ, anyị nwere ike ịkwanyere ndị ọrụ ùgwù; naanị ihe ọhụrụ, anyị nwere ike igosipụta onwe anyị na ahịa mgbanwe. Ebumnuche azụmahịa dị mma, ike ọrụ ike, anyị nwere ike ime ka uche anyị dị mma ma laghachite na ndị ọrụ anyị ma zute nkwa maka onye mmekọ. Anyị ga-aga n'ihu ulo oru mgbanwe, ike a ọhụrụ oge na ọgụgụ isi nri ebe.
Anyị na-edebe na-aga n'ihu n'okporo ụzọ nke nnwere onwe ọhụrụ na-arụ ọrụ nke ọma ma mepụta elu ọhụrụ.
Anyị na-aga "ụlọ ọrụ mmepụta ihe" usoro mmepe eji obi ike wee mee usoro ọhụụ;
Anyị na-akpọ "China ụlọ ọrụ 4.0 maka ọgụgụ isi nri technology", ike "China ọgụgụ isi Ndinam".
Ya mere, anyị na-eme ihe site na kachasị mma gaa n'oge ezumike dị oke mma.
Aha Companylọ Ọrụ: Guangzhou Baiyi Intelligent Equipment Co., Ltd.
Lọ ọrụ: A7, Mba 500 nke Guangshan 1abụrụ. Rd. Mpaghara Tianhe, Guangzhou.
Onye Kpọtụrụ: Ms. Easy Ouyang
Ekwentị Nke +8613435663216
Adreesị:A7, Yinhu Industrial Area, Nke 500 nke Guangshan 1ST. Zọ, Tianhe District, Guangzhou.